Furan faylka GML ee QGIS iyo Microstation - Geofumadas
Furan faylka GML oo leh QGIS iyo Microstation
Mee, 2015 Microstation-Bentley, qgis
Foomka GML waa mid ka mid ah qaababka ugu qaalisan ee soo saarayaasha horumarinta iyo isticmaalayaasha GIS, tan iyo marka laga reebo qaabka lagu taageerayo oo loo qoondeeyey OGC, waxay si aad ah ugu shaqeyneysaa beddelka iyo is-weydaarsiga xogta codsiyada websaydhka.
GML waa codsiga luuqada XML ee ulajeedooyinka geospatial, xarafadahani waxay u taagan yihiin Juqraafiga Qeybta Sawirka. Tani waxay suurtogal u tahay in aad u dirto faylka qoraalka, faylka vector iyo xataa sawirada isticmaalaya GMLJP2. Muujinteeda waxay ku salaysan tahay qeexida qaab dhismeedka node (waxa halkaa ku yaal) iyo xogta lafteeda, si barnaamijka GIS wax loo akhriyo faylka GML wuxuu marka hore tarjumayaa astaamihiisa profile kadibna wuxuu muujiyaa xogta juqraafi waxaa jira waxyaabo.
Tusaale ahaan sawirka hore wuxuu u dhigmaa dhaqdhaqaaqa dayactirka cadastaroolka, taas oo ay ku jirto guri ku yaal xaaladiisii ​​ugu horreysay, isla markaana la mid ah laba shey oo la maro, iyadoo la raacayo macluumaadka alphanumeric.
Sida loo akhriyo faylka GML oo la adeegsanayo QGIS.
Tani waa sida fudud sida software-ka oo lacag la'aan ah:
Layer> ku dar lakabka> ku dar lakabka vector> raad-raac
Halkan waxaa la dooranayaa GML doorasho, waana taas.
Si aad u kaydiso lakab QGIS sida faylka GLM, kaliya ku dhufo lakabka, badbaadi sidii oo dooro xulashada GML.
Halkan waxaa lagama maarmaan ah in la qeexo qaababka qaar, tusaale ahaan:
Waa nidaam tixraac ah, oo noqon kara mid hore u leh lakabka lagu qeexay.
Calaamadaynta astaanta, Laatiin 1 waa mid ku haboon in aan dhibaato ku keenin maqaalo iyo waraaqo ñ ah ee asalkiisa Hispanic.
Habka waa muhiim, iyadoo la adeegsanayo GML 3 waxay noqon doontaa mid aad u xasilloon haddii aan dooneyno inaan akhrino barnaamijyada kale ama lagu faafiyo Geoserver.
Sidoo kale, waa in la aasaasaa haddii aan rabno in qorshaha lagu daro faylkaas ama si gooni gooni ah. Haddii ay dhacdo in la akhriyo Bentley Map, waxaa loo baahan yahay in ay kala tagto, sida sharaxaad ka dib.
Sida loo akhriyo faylka GML oo leh Microstation V8i
Farsamadani waxa kaliya oo lagu sameyn karaa oo keliya codsiyada Microstation GIS, sida Bentley Map, PowerView, Bentley Cadastre, ama wax la mid ah.
Xaaladayda, haddii aan isticmaalayo Khariidadda Bentley, waxaa loo sameeyaa sidan:
Faylka> Soo dejinta> Noocyada Macluumaadka GIS ...
Sida aad u arki karto, halkan sidoo kale waxaad ku wici kartaa lakabyada jimicsiga ee adeega WFS, Websaytka Oracle Spatial, SQL Server.
Faylasha SHP wax dhib ah ma leh marka ay furan yihiin.
Marka laga hadlayo faylasha GML, ku dar Diiwaanka GML ...
Guddiga soo muuqda, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto haddii feylka asalka ah uu yahay mid gooni ah. Faylka schem Bentley waxaa loo yaqaan XSD.
Oo markaasi la dhammeeyo, ku dhufo oo ku dhaji Jadwalka Wax-is-dhaafsiga, oo dooro Hormarinta kaliya si aad u soo bandhigto ama soo dhoofiso si aad u keento khariidada.
Marka aad sheyga ku weydiisatid badhanka "Falanqaynta", oo lagu calaamadiyey labo sawir, iyo taabashada sheyga, xogta xogta ayaa kor u qaadaysa labadaba sanduuqa iyo xml, sida ku cad muuqaalka soo socda.
Si loo dhoofiyo GML qaababka soo socda ayaa la raacayaa:
Faylka> Dhoofinta> Nooca Macluumaadka GIS ...
Labada foomba, oo leh labada QGIS iyo Bentley Map, waxaa suurtogal ah in si sahlan loogu habeeyo GML sida faylka vector kasta, iyo sidoo kale xogta alphanumeric.
Post Previous«Previous GIM-da International Español, waxay ku sii socotaa guul wacan
Post Next CHIP dollar Microcomputer 9Next »
2 Jawaab in "Fur faylka GML leh QGIS iyo Microstation"
Francisco J Corral Nieto isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kugula talineynaa codsiga shabakadda IGN IberPix4, ugu fiican ee furan, isbeddel, badbaadin (gml, shp, kmz).
Transparencies, daabacadaha, iwm.
Barnaamijkani waa mid sahlan in la arko, oo lacag la'aan ah: